Mapepa eiyo tuna chiuno negariki: Isla Cristina, inotonhora, yakabikwa uye nezvimwe! | Kicheni Mapepa
Tuna chiuno negariki
Susana godoy | | Hove Mapoka, Mapepa ane hutano, Nyore Mapepa
Unoda here kubika tuna chiuno? Tuna hove yebhuruu, ine hutano hwakanyanya nekuda kwehuwandu hwayo hweprotein, yakazara calcium, mavitamini uye omega 3. fatty acids.Ichikafu chinonaka kwazvo, chakaratidza mabikirwo mazhinji anonaka. Nhasi tichagadzirira tuna chiuno negariki newaini chena.
Nguva yekugadzirira: Maminitsi makumi matatu
1 Tuna negariki kubva kuna Isla Cristina
2 Cold garlic tuna recipe
3 Yakakangwa gariki tuna
Izvi ndizvo zvinoshandiswa zvaunofanira kutora kuti ugadzirire kushandira vanhu vatatu kana vana.
4 tuna chiuno
1 girazi rewaini chena
1 teaspoon yemasitadhi.
munyu, mhiripiri, mafuta omuorivhi
Isu tinoisa zviuno kuti zvisvike muhombodo ine mapuniki mana emafuta emuorivhi.
Kana dziri goridhe pamativi ese maviri, mwaka uye wedzera iyo minced garlic pamwe newaini, muto wehafu yemoni nemasitadhi.
Simudza pamusoro pekupisa zvine mwero kusvikira muto watanga kuvhara uye wobva wawedzera parsley yakagurwa.
Panzvimbo pekugaya gariki, unogona kuicheka kuita zvidimbu zvidete. Gadzirira nemonmon wedges. Chinhu chakanaka chinoperekedza kune iyi dhishi yakabikwa kana mbatatisi yakachekwa.
Tuna ndeimwe yehove dzinonyanya kudyiwa nevose. Dzimwe nguva tinozozvitora zvakakonzerwa uye mune vamwe, zvitsva. Pasina kupokana, iyi sarudzo yekupedzisira inopfuura yakakwana kuti ugone kugadzira mhando dzakasiyana dzeresipi. Zvine Omega-3 mafuta acids asi pamusoro pezvo, inodzivirira zvimwe zvirwere zvemwoyo panguva imwe chete iyo inodzivirira uropi hwedu. Iwe unoda here zvimwe zvikonzero kuti uidye? Pazasi pane mamwe mapepanhau eunouno chiuno kana iwe wanga uchinge uchingoda zvimwe.
Tuna negariki kubva kuna Isla Cristina
Imwe yenzvimbo huru dzekuredza kana tichitaura nezve tuna Isla Cristina. Iyi masipala weHuelva ine chiitiko chakakosha chiri kubata hove. Nekudaro, zvigadzirwa zvakanakisa pamusika zvinogona kuwanikwa. Kunyangwe tuna inogona kugadzirwa munzira dzakawanda, iyo tuna negariki kubva kuna Isla Cristina ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa uye ane mukurumbira.
Hafu yekilo tuna (kana uchikwanisa kusarudza, hapana chakafanana nechikamu chinonzi Tarantelo. Chidimbu chakaumbwa netriangle chakaiswa padyo nepachiuno uye pamberi peyaanonzi muswe muchena).
Hafu yegirazi revhiniga
Mavhiri maviri egariki
Kutanga iwe unofanirwa kubika iyo tuna nemvura, munyu uye vhiniga. Kana yabikwa, unoibvisa woicheka kuita zvidimbu kana zvidimbu. Zvichakadaro, iwe unofanirwa kukwenya gariki pamwe nekumini. Iwe unogona kuwedzera imwezve chipunu chevhiniga. Zvino iwe unofanirwa kudaro mwaka chimwe nechimwe chidimbu che tuna uye upfuure kuburikidza negariki uye kumini musanganiswa. Dzinoiswa mumudziyo uye mafuta anodirwa pamusoro padzo, kusvikira chidimbu chimwe nechimwe chanyatso kufushirwa. Chekupedzisira, iwe unofanirwa kuirega ichizorora kusvikira zuva rinotevera uye woishandira kuchitonhora.
Cold garlic tuna recipe
Hafu yekilo ye tuna loin
XNUMX/XNUMX jisi remonimu
Tichaisa pamoto hari ine mvura, muto wemonimu, munyu, pamwe chete nemavhavha uye shizha re bay. Kana ikangotanga kubika, isu tinofanirwa kuwedzera iyo tuna loin. Tiri kuzoisiya kwemaminitsi gumi nemaviri. Kana imwe nguva yapfuura, tinoibvisa kubva pamoto uye tichipfuura nemumvura inotonhora.
Ino ndiyo nguva yekumisikidza tuna uye kuiisa patray. Kune rimwe divi, isu tichasanganisa gariki uye parsley. Yasvika nguva yekuenda kucheka tuna yedu kuita zvidimbu zvidiki.
Tichavaisa mumudziyo muhombe. Pavari, isu tinowedzera gariki uye musanganiswa weparsley, kuwedzera mamwe matete e tuna pamusoro. Pakupedzisira, tichawedzera mafuta kuti tifukidze. Nenzira imwecheteyo senge mune yekubika yapfuura, isu tinofanirwa kuirega izare mufiriji. Kuti uite izvi, hapana chakafanana nekugara uchichiita zuro wacho. Ehe, inozopihwa inotonhora.
Yakakangwa gariki tuna
Kutanga isu tinofanirwa kuchekachesa magariki macheki. Tichavavhenganisa neparsley, zvakare yakasarudzwa zvakanaka. Wedzera zvishoma maorivhi uye chengetedza. Isu tinodziya griddle uko isu tichagadzira yedu tuna steaks.
Tinowedzera mafuta mashoma uye tinoisa mafirita. Isu tinowedzera munyu mushoma pavari uye tovasiya kwemaminitsi mana kudivi rega, angangoita. Isu tinovaisa patireyi uye tobva tawedzera maspuniki akati wandei ekupfeka atakange tagadzira negariki, parsley nemafuta.
¡Chikafu chinokurumidza uye chinonaka kwazvo senge yakachekwa garandi tuna!.
Kana iwe uchida tuna sezvatinoita, edza nayo nemuto wemadomasi 😉:
Tuna pamwe nemadomasi muto
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Hove Mapoka » Tuna chiuno negariki
ALICIA RAMOS akadaro
NDINODA Iyi RISIPE ASI HANDINA PARASI
Pindura kuna ALICIA RAMOS
pie nebhora akadaro
Po bvunza muvakidzani kana utenge
Mazai akatswanywa nemadomasi uye avocado